Encrypt USB memory muLinux nyore kwazvo | Linux Vakapindwa muropa
Paunenge uine USB tsvimbo iyo iwe yaunoda kuchengetedza kuti udzivise prying maziso, iwe ungafanira kudaro encrypt yako data kuitira kuti pasave neasina password anogona kuwana iwo. Semuenzaniso, kana chimwe chezvigadzirwa izvi chikagovaniswa kana chiri mukati mevanhu vanoverengeka vasingafanire kuwana, ndiyo mhinduro yakanaka yekudzivirira.
Zviite paLinux Zviri nyore kwazvo, une zvakawanda zvingasarudzika. Semuenzaniso, mune ino dzidzo ini ndinoshandisa nzira inoshanda yeDebian / Ubuntu distro uye zvigadzirwa, kunyangwe zvichikwanisawo kushanda nenzira yakafanana kune vamwe kana iwe ukaisa maapplication andiri kuenda kunatsanangudza pano.
Kuti usimbise memory yako ye USB, unofanira kutanga waita zvirongwa zviviri zvekushandisa. Imwe yacho igrafiki chishandiso Disks, chishandiso chaunenge watove nekuisa kana ukashandisa iyo GNOME desktop nharaunda nekutadza. Imwe ndeye cryptsetup, chinova chishandiso cheCLI. Kana pane chimwe chikonzero usina, ndinokurudzira kuti uite mirairo iyi:
Zvino, iwe unofanirwa kunge uchitovaisa. Chinhu chinotevera kusarudza zita re USB memory yako kunyorera. Kuti uite izvi, taura pendrive yako kuchiteshi che USB uye ita rairo
Izvozvo inonyora midhiya iripoPakati pavo, iwe unofanirwa kuona kuti ndechipi chikamu kana svikiro inoenderana neyako USB ndangariro. Izvo zvakakosha kuti iwe uzive iro zita mushe uye usazovhiringidzika, kana iwe unogona kunyorera imwe dhiraivha isiri iyo chaiyo ...
Izvo zvakakosha kuti iyo pendrive haina kana chinhu mukati, kana kana ikadaro, kuti iwe ugadzire backup kopi, sezvo iyo data ichadzimwa mukuita, sezvo iyo unit ichave yakamisikidzwa.
Zvino ivo vaizotanga matanho ekunyora chikwata:
Vhura Discs kana Dhisiki.
Sarudza iyo USB pendrive ipapo pakati pezvikamu zvakaratidzwa kuruboshwe.
Bvarura unit nekudzvanya pa Mira bhokisi kurudyi, pasi pemufananidzo wechikamu.
Iye zvino tinya pane iyo giya icon kuratidza sarudzo. Sarudza Fomati kugovera ...
Yasvika nguva yekusarudza sarudzo. Tumidza zita rako USB drive chero chaunoda. Muchikamu cheType sarudza «Yemukati dhisiki yekushandisa neLinux masisitimu chete (ext4)«. Nyorawo «Pasiwedhi Yakachengetedzwa Vhoriyamu (LUKS)»Kunyora.
Muhwindo rinotevera rinobvunza iyo pasiwedhi kunyorera. Usarasikirwa nazvo, kana iwe haugone kuwana yako data. Paunenge uchinge wanyora kaviri, tinya Next.
Iye zvino zvinokuratidza yambiro yekuti data richarasika paunenge uchimisikidza. Dhinda Format.
Mirira kuti ipedze maitiro uye iwe uchave neyuniti yakagadzirira.
Zvino for vanopinda inokumbira iwe password yako, saka, hapana munhu asina iyo anokwanisa kuwana iyo data.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Encrypt USB memory muLinux zviri nyore
Finit 4.0: yakapusa imwe nzira kune systemd uye SysV init